DIGAAGGA UGU BADAN EE UKUMAHA QAADA LEGGORN EE GURIGAAGA DIGAAGA: WAX KASTA OO AAD U BAAHAN TAHAY INAAD KA OGAATO KU SAABSAN TARANKA - BEERAHA DIGAAGA
Inkasta oo maanta ay fududahay in la helo daraasad daraasad ah iyo noocyo digaag ah, kuwaas oo lagu kala saaro wax soo saarka wanaagsan, hase yeeshee cayayaanka si fiican loo yaqaan looma lumiyo xiriirkooda.
Gaar ahaan, mid ka mid ah waa digaagaha Leggorn, kuwaas oo sannado badan loo yaqaan caalamka oo dhan sifooyinka wanaagsan.
Intaa waxaa dheer, maanta waxay si firfircoon u isticmaalaan ilaha hidaha ee mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee soo saarista digaagga cusub.
Mawduucda maqaalku waxay horay kuu keentay in caanahaani ay caan u tahay ukumo-saarista.
Si kastaba ha ahaatee, tani ma ahan mudnaanta kaliya, sababtoo ah waxaan go'aansanay inaan si qotodheer kuugu ogaanno Leghorn.
Noocyo kala duwan iyo muuqaalada kale ee Curia Leggorn
Asalka caanahaani waa Talyaani, si kastaba ha ahaatee, waa wax caadi ah oo ka baxsan dalkan muddo dheer. Dhammaan sifooyinka Leghornam waxaa lagu heley by tarbuunka, sababtoo ah markii hore ahaa qiimo gaar ah.
Sidoo kale, horumarinta noocan oo kale ah ayaa waxaa fuliya khabiiro ilaa maanta, iyadoo ku saleysan digaagga kuwaas oo tiro badan oo noocyo cusub ah iyo noocyo cusub oo la soo saaray, kuwaas oo sidoo kale helaya caansaankooda.
Muuqaalka iyo xuduudaha Leggornovskoy ee curia of curia
Sannado badan, taranta iyo taranta ee noocyada this ee digaagga ayaa la helay noocyo kala duwan oo midab ah. Si kastaba ha ahaatee kan ugu caansan wadamadeena waa shimbiraha midab cad (iyo guud ahaan, midabkani waa midka ugu caansan ee taranka).
Laakiin, haddii ay tahay inaad la kulantid madow, buluug, buluug, digaaga ama digaagga buniga, waxay sidoo kale u noqon karaan Leghorn.
Calaamadaha dhammaantood waxay noqon doonaan qiyaas yar oo ka mid ah jirka, taas oo xitaa dadka waaweyni ku dheehan tahay. Sidoo kale, qaabkoodu waa mid aad u kala duwan.
Sidoo kale, ilaa sifooyin kala duwan Shimbirahan waxaa ka mid ah sifooyinka soo socda:
Maqaarka digaaggu badankiisu waa mid huruud ah ama midab leh.
Cabbirta madaxu waa yar tahay, shanlada ayaa sidoo kale ah dhexdhexaad ah, casaan dhalaalaya.
Foornadu waa mid ka mid ah farqiga u dhexeeya digaagga iyo duufaanka, tan iyo markii hore waxaa laga yaabaa in la yareeyo, waxna ugu dambeyntii waa caadi. Qoorta waa muddo dheer oo khafiif ah oo ka mid ah wakiilada labada jinsi ee caanahan.
Marka la barbardhigo nuucyada kale, Leggorn waxay leeyihiin dhar gaaban oo leh midab huruud ah. Muuqaal xiiso leh ayaa ah in caaradu ay yar tahay.
In kasta oo xaqiiqda ah in dhabarka curia ee taranka ee lagu sharraxay waa flat, waxay ku kala duwan yihiin laabta xiga iyo meel yar oo balaadhan.
Marka da'da qaan gaadhka ah la gaaro, lugaha lugaha waxay sameeyaan cadaan iyo dhuuban, dhererkoodu waa dhexdhexaad. Waa in la ogaadaa in digaagga iyo da'da yar ee maqaarka lugaha inta badan waa huruud.
Dumarka labadaba digaagga iyo lafaha Leggorn labadaba waa mid ballaaran, marka la eego jirku wuxuu u jilicsan yahay 40º. Laakiin halkan oo ku yaal digaagga inta badan waa yar yahay, halka musqulaha kor loo qaado.
Calaamadaha ugu muhiimsan ee wax soo saarka Leggornov ayaa sigaar cabba qoyska
Noocyada digaagga ee sida caadiga ah waxaa la sameeyaa oo keliya kuwa doonaya inay ukumaha ka helaan. Marka laga hadlayo, waxay yihiin kooxda heysata dhabta, sababtoo ah qiyaasta ukumahoodu waa 300 ukumood sanadkiiba, halka ukumo badan oo ka mid ah lakabka laga heli karo sanadka ugu horeeya noloshiisa.
Faa'iidada ugu weyni waxay sidoo kale tahay xaqiiqda ah in ukumaha ukumaha ay bilaabaan inay horey u qaadaan 4.5 ilaa 5 bilood ee noloshooda, taas oo ah, marka laga hadlayo, shimbiraha labada jinsiba waxay billaabaan qaansiir.
Marka laga hadlayo ukunta naftooda, waxay sidoo kale yihiin kuwo aad u weyn oo ku jira noocaan, laga bilaabo 55 illaa 70 garaam. Eggshell waa cad, oo leh cunto wanaagsan oo digaag adag.
Dhaqan ahaan ukumaha oo dhan laga soo saaro digaaga Leggorn waa la bacrimiyey, maadaama maaddada bacriminta lafteedu aanay hoos udhicin 95%. Heerka digaagga xayawaanka ayaa aad u hooseeya, inkasta oo guud ahaan aad u sarreeya - 92-93%.
Hase yeeshee, sida hilibka hilibka ah, digaagga ayaa si aan fiicnayn loo qiimeyn, sababta ugu weyn ee ay tahay miisaankoodu hooseeyo. Sidaa darteed, xitaa marka ay ku weyn yihiin iyo saldhig cunto oo hodan leh, digaagdaha qaangaarka ah waxay gaaraan miisaanka 1.5-2 kiilo oo kaliya, miisaankana ugu sarreeya lakabka ayaa gaari kara 2.6 kiilogaraam oo keliya.
Laakiin marka laga reebo xaqiiqda ah in caanadani soo saarto waxoogaa hilib ah, sidoo kale maaha mid ku filan oo ku filan isticmaalka. Gaar ahaan, kuma faani karto jilicsanaanta iyo hodanka sida ku jirta jubilee Kuchinsky.
Faa'iidooyinka Leggornovskaya, kaas oo aad si dhab ah u fiirsan doonaa
Nafaqeynta digaagga ayaa faa'iido leh maahan oo keliya marka la eego helitaanka tiro badan oo tayo sare leh, laakiin sidoo kale waa mid sahlan. Gaar ahaan, waxay ka doorbidaan dabeecadooda, xasilloonaan la'aan iyo inaysan maqlin.
Is dhexgalka dadka, ayay aad u saaxiibtinimo, si deg deg ah u isticmaal mulkiilaha, ha ka baqin iyo horumarinta shaxanka xaaladaha u dhexeeya muuqaalkaaga iyo muuqaalka cuntada.
Intaa waxaa dheer, in kasta oo uu asal ahaan ka soo jeedo Talyaaniga, digaagga ayaa si fiican u dabooli kara xaaladaha kala duwan ee xabsiga - laga bilaabo ugu kulul ilaa cimilada ugu qabow.
Cimilada qaboobaha ayaa si aad ah u saameyn karta caafimaadkooda: marka laga reebo nuucyada kale, goobaha furan ee jirka Leggorn (dhegaha, taranka, gadhka, iyo lugaha) marar dhif ah ayaa barafoobaya, inkastoo aysan noqon laheyn mid aad u badan oo lagu diiriyo guriga jiilaalka.
Waxa kale oo xiiso leh in laga akhriyo cudurada digaaga.
Miyuu jiilku leeyahay cillado iyo maxay yihiin?
Inkasta oo, guud ahaan, wax soo saarka ukumaha Leggornov waa mid aad u sarreeya, oo wuxuu ku jiraa heer aad u qanacsan inta lagu jiro nolosha guud ee hen, sanadka labaad wuxuu aad u culus yahay.
Dabcan, marka la barbardhigo noocyada kale, tan guud ahaan looma tixgelin karo wax halis ah, laakiin caanahan, hoos u dhaca soo saaridda ukunta ilaa heerka wax soo saarka ee 150 ukumood sannadkii waxaa loo tixgeliyaa inay ku dhawaad ​​halis ugu jiraan.
Sababtan awgeed, beeraleyda digaaga iyo beeralayda badan ayaa doorbida inay beddelaan digaagga shakhsiyaadka cusub ee 1.5 sano kasta, oo dadka da'da ah u beddel hilibka.
Si kastaba ha noqotee, arrinka dib-u-dhalashada ee jiilalka cusub ee Leggornas ayaa sidoo kale ah mid aad u dhib badan oo udhaxeeya. Gaar ahaan, inkastoo bacriminta wanaagsan ee ukunta iyo hatchability iyaga oo dhalinyarada, waxaa lagu dhejin karaa oo keliya kiniin ama ku dhejinta ukunta Digaagga Leggorn ee noocyada kale ee curia.
Xaqiiqdu waxay tahay in dareenka ilbaxnimada ee caanahan ay ku dhowdahay gebi ahaanba lumay. Haddii ugu yaraan mid ka mid ah 50 digaagga ayaa muujinaya rabitaan ah in uu soo saaro jiil cusub, suurtogalnimada in uusan dhali doonin ukumuhu weli wuu yaraanayaa.
Sharaxaadda noocyada kale ee Leggorn: ugu caansan iyo wax soo saar
White Leghorn ma aha mid gaar ah. Iyadoo loo isticmaalo sida maadada jimicsiga ugu weyn, dabeecadaha kale, wax yar oo wax soo saar, noocyada digaagga ayaa la soo saaray.
Sidaa darteed, haddii aad ku guuleysatid inaad la kulanto "Leggorn" oo badan, u fiirso iyaga sidoo kale.
Digaagdiis ama midab tufaax ah oo talyaani ah
Tani waxaa la mid ah digaaga sidoo kale iska leh ukunta. Muuqaalka muuqaalka ah ee Leggorn caleemaha waa cirfiidka galmada ee midabaynta xayawaanka.
Shukumaatiyadu waxay si gaar ah u iftiimayaan, maxaa yeelay qoortooda iyo gadaashooda waxaa lagu daboolay baalal dahab ah oo casaan ah.
Iyo laabta, caloosha iyo dabada ayaa madow oo leh shinni cagaaran oo qaali ah. Laakiin digaagu waa midabyo badan oo midab leh, oo aan hodan ahayn.
Noockan noocan ah ee roodhida lagu sharraxay maqaalkan ayaa iska leh shimbiraha autosex, jinsiga taas oo laga yaabo in ay hore u kala soocaan maalinta ugu horreysa ka dib marka laga soo bilaabo ukunta. Ragga waxaad ku garan kartaa midabka khafiifka ah ee qoriga.
Digaagga Kuwani waa mid aad u fudud in la hayo sababtoo ah aan qabyo ahayn oo waxtar lehsida Leghorny cad. Shimbiruhu wax badan ayuu u dhaqaaqaa wuxuuna leeyahay dabeecad aad u fiican.
Marka qaangaarnimada, cirridka iyo digaaga ayaa ku kala duwanaan la'aanta oo kaliya, laakiin sidoo kale midabka. Digaagga ee noocaan ah waa mid waxtar leh in la dhigo ukunta leh qolofka caadiga ah ee caadiga ah.
Si kastaba ha ahaatee ukunta waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Dareenkooda sidoo kale waa liidaa horumarsan. Dadka waaweyni waxay gaari karaan miisaanka ugu sarreeya ee 3.5 kiilogaraam.
Leghorn Golden - isku dhaf ah qurux iyo wax soo saar
Midabada dahabka ah iyo cabbirka yar ee baqtigu wuxuu digaagadan ku dhawaad ​​u samaysanayaa qurxiyo, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin wax soo saar aan caadi aheyn. Sidaa darteed, hal sano, hal hen ah celcelis ahaan qiyaastiisu tahay 260-265 ukun.
Miisaanka hal ukun wuxuu kala duwanaan karaa 60 ilaa 61 garaam, qoladooda waa caddaan. Shukriga qiyaas ahaan miisaankoodu waa 2.2 kg, iyo digaag - 1.9.
Sawiray Leghorn - caleemaha ugu qumman ee digaagga
Nadiifinta caanahan ayaa la damaanadqaadayaa xaqiiqda ah in ay ku dhowdahay in ay ku dhawaato, iyo mustaqbalka looma qasin wax kale oo noocyo kale ah.
Isla mar ahaantaana, midabka aan caadi ahayn wuxuu u dhigmaa kaliya Leggornas, maadaama ay ku badan yihiin caddaan marka la isku daro midab madow iyo caddaan ah.
Sida caadiga ah kiiskan waxaa jira baalal badan oo madow.
Isla mar ahaantaana, labadii midab ee asaasiga ah ee roodhida shimbiraha ayaa u muuqda in la geynayo gabi ahaanba fawdo, inkasta oo aad si dhow u eegto, si sahlan ayaad u arki kartaa xaalad caadi ah.
Wax soo saarka ukunta layers of this caan aad u sarreeya, 200 ilaa 250 ukumo sannadkii. Miisaanka celceliska shimbiraha wuxuu u dhexeeyaa 1.8 ilaa 2.7 kiilo, taas oo ku xidhan jinsiga qofka.
Waxaan ku hawlanahay taranka iyo taranka Leggornov guriga
Talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan digaag
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad Leggorn gurigaaga ku hayso sannado badan oo isku xigta, markaa habka kaliya ee aad u heli lahayd jiil cusub oo digaagga ah ayaa noqon doona inaad soo iibsatid digaagga ama isticmaalka mindhicirka macmalka ah ama midab kale oo jilicsan.
Intaa waxaa dheer, ukumaha ku haboon naftooda, ma aha oo kaliya iibsadeen, sababtoo ah kiis kasta waxay bixiyaan natiijooyin fiican. Ma aha wax adag in la iibsado xayawaanka yaryar iyo ukunta Leggorn, tan tan Caanuhu waa mid aad u badan oo loo yaqaan beeraleyda digaaga badan.
In digaagga taranta breed Leggorn ma ah wax adag, iyo sidoo kale ee daryeelka dadka waaweyn. Faa'iidadooda ugu wayni waa la tixgeliyaa korodhka sareeya iyo badbaadada xitaa maqnaanshaha "hooyo".
Hase yeeshee, xaaladaha qaarkood ee lagama maarmaanka ah waa in la buuxiyaa, sidoo kale ha ilaawin nafaqada wanaagsan. Sidaa darteed, isla markiiba ka soo kabashada qolofka, digaagga waxaa la siiyaa ukun digaag ah, jilicsan oo lagu duubay semolina.
Waqti ka dib, waxaa suurtogal ah in la bilaabo bacriminta, hadhuudhka (qasab lagama miiro), cunto laf dhab ah.
Tan iyo markii tani ay sii kordhayso si dhakhso ah, ka dibna da'da hal bil oo ah digaagga ayaa si buuxda u cuni kara cunto isku mid ah sida digaagga qaangaarka ah, kaliya waxay cuni doonaan wax ka yar.
Shuruudaha ilaalinta shimbiraha qaangaarka Leggorn jinsiga
Waa mid aad u sahlan in la koro noocaan oo ah xaalad kasta, xataa iyada oo aan wax badan ka qaban karin dhismaha guriga ugu fiican. Sidoo kale si wax ku ool ah ayaa loo geyn doonaa guriga marka loo eego dhulka, iyo batariyada gaarka ah ee unugyada.
Xitaa xitaa muhiim maaha inaad bixiso meelo badan oo socod ahsababtoo ah haddii xitaa la siiyo boos yar, ma waayaan muuqaalkooda caafimaad iyo jahwareer.
Laakiin weli, dad aad u badan iyo cufnaanta sidoo kale ma aha mid macquul ah, tan iyo kiiskan shimbiraha ayaa bilaabi kara inay aad u jiran.
Sidaa darteed, marka la eego kobcinta warshadaha iyo dayactirka Leggorn, waa muhiim inaad isku daydo inaad ka baxdo meesha ugu badan ee suurtogalka ah ee qof waliba oo aad u fuliso ka hortagga cudurka: Aad bay muhiim u tahay inaad ku darto antibiyootiko badan iyo diyaar garowga hormoon si digaag lagu quudiyo.
Tani ma aha oo keliya in la yareeyo halista faafinta fayrasyada iyo bakteeriyada kala duwan, laakiin sidoo kale waxay hagaajinaysaa difaaca shimbiraha. Sidoo kale, wax soo saarka warshadaynta, sanad kadib, geedka digaagga ayaa la diidi doonaa.
Dhibaatada kaliya ee haysashada digaagga Leggorn waa baahida loo qabo in lagu hayo aamusnaanta joogtada ah inta lagu jiro xilliga ugu badnaan soo saarka ukunta. Haddii kale, shakhsiyaadka bukaanka ah ayaa laga yaabaa inay dareemaan qulqulatooyin qaylada dhabta ah.
Taasi waa, shimbiruhu waxay bilaabaan inay si qoto dheer u qaylinayaan, iyagoo boogahooda googoynaya iyaga oo waxyeello u geysanaya qafiska ama xakameynaya iyaga midba midka kale. Natiijada tani waxay noqonaysaa hoos u dhac soo-saarka ukunta iyo guud ahaan awoodda.
Marka la tarbiyo oo koraayo caanaha gurigaan, uma baahnid in la abuuro shuruudo khaas ah. Dabcan, guriga waa inuu ahaadaa tiro ku filan oo qoyan iyo buulal badan oo ukun ah, quudiya cunto iyo cabitaan.
Ha iloobin khariidada joogtada ah iyo daaweynta nadaafadda ee cadka digaaga, kuwaas oo kaa caawin doona kahortagga faafidda cudurka.
Waa muhiim muhiim! Waxaan ku soo celcelinay in wax soo saarka ukunta ee ukunta Leggornov's ayaa si weyn loo yareeyey sanadka labaad. Sababtan awgeed, ma aha mid u qalma in dadka waaweyn lagu iibsado suuqa, inkasta oo beeraleyda digaaga ee aan daaqada lahayn ay ku hawlan yihiin sida ganacsi. Waxaa ugu wanaagsan in la iibsado ukun digaag ah oo ka mid ah noocan oo kale ah kuna rid on hen, ama iibsato digaagga yar.
Cunto qaadashada digaag: sida loo siiyo shimbiraha leh kuwa ugu muhiimsan?
Tayo kale oo tayo wanaagsan Leggornov digaag - waxay cunaan wax aad u yar, taas oo si weyn u badbaadin doonta quudinta iyaga. Sidaa darteed, digaagga ayaa si weyn uga faa'iideysta kharashka badan. Xidhanka kaliya: inkastoo aysan jirin cunto badan, waa inay ahaataa mid tayo sare leh.
Si loo ilaaliyo dheef-shiid kiimikaadka caadiga ah ee digaagga iyo hubinta wax soo saarka ukunta, waa mid aad u muhiim ah in lagu dheellitiro nuujinta marka la eego nuxurka borotiinka iyo macdanta.
Intaa waxaa dheer, khamaaristu waa inaysan sameynin oo kaliya faa'iidada iyo qiimaha nafaqada ee cuntada, laakiin sidoo kale noocyada kala duwan iyo tan cusub. Gaar ahaan, hadhuudhka, cuntada lafaha, limeecada lakulmaysa, jiirka, iyo waxyaabo kale oo macdanta laga qodo waa in si joogto ah loogu shubaa feederiyeyaasha. Ha ka baqin in xayawaankaaga ay bilaabi doonaan in ay qaadaan dufan aad u badan - ma cunaan wax ka badan inta ay u baahan yihiin.
Marka lagu daro quudinta caadiga ah, ha ilaawin inaad sameyso cunto kala duwan oo isticmaalaya mashad qoyan, iyo sidoo kale fitamiin quudin. Laakiin kiiskan ma aha lagama maarmaan in la siiyo cunto badan, si ay u joogsato oo aan waxba dhicin.
Qeybaha waa in ay ahaadaan uun sida ay ku dari karaan dhammaan shakhsiyaadka waqti. Sidoo kale ha ilaawin si joogto ah u buuxi berkadaha si biyo nadiif ah iyo biyo cusub.
Si looga hortago shimbiraha in ay daadinayaan qoyaanka oo dhan guriga, taangiyada waa in lagu dhejiyaa meelaha hoose. Iyada oo cunto caafimaad leh, waxaad isla markiiba ogaan doontaa in lakabyada ay noqdeen kuwo firfircoon marka la dhigo ukumaha, tayada iyo qiyaasta taas oo sidoo kale kordhin doonta.